यसकारण हुन्छ पुरुषमा नि:सन्तान::JaljalaKhabar Online Portal from Nepal
शुक्रबार, साउन ३, २०७६ | Friday 19th July 2019
यसकारण हुन्छ पुरुषमा नि:सन्तान
२४ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार ०८:५६
महिला वा पुरुष दुवैको कारण निःसन्तानको समस्या हुन सक्छ । कुनै दम्पतीबाट सन्तान नभएको खण्डमा श्रीमान्–श्रीमती नै भागीदार हुन्छन् । अहिले पनि अशिक्षित समाजमा निःसन्तानको कारक महिलालाई मात्र मानिन्छ जुन गलत छ । यी हुन् पुरुषमा निःसन्तान हुनाका कारण :
पुरुषको वीर्यमा शुक्रकीट नहुँदा सन्तान जन्मन सक्दैन । अथवा कम हुँदा पनि यस्तो समस्या सिर्जना हुन सक्छ । पुरुषको यौन क्षमता र यौन चाहना कमजोर हुँदा निःसन्तानको समस्या हुन सक्छ । शारीरिक सम्पर्कका वेला स्खलन नहुँदासमेत निःसन्तानको समस्या हुन सक्छ ।
धेरै महिलासँग अनैतिक सम्बन्ध राख्ने पुरुषहरूको बच्चा नहुने सम्भावना हुन्छ । पौष्टिक तत्व र आरामको कमी, कसिलो अन्डरवेयरको प्रयोग, शरीरले ढान्नेभन्दा गाह्रो काम, सेक्सुअल्ली डिजिज पनि निःसन्तानका कारक हुन् ।
२० देखि ३० प्रतिशतमा थाहा नभएका कारणले बाँझोपन हुन्छ । यसमा अन्य थप जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो समस्या भएमा क्रोमोजोम र अन्य हर्मोनको जाँच गर्नुपर्छ । यसपछिमा कतिपय कारण पत्ता लाग्न सक्छ ।
कतिपय दम्पतीमा यौनसम्बन्धी आ–आफ्नै समस्या हुन्छन् । दुवैको समस्या जुध्न पुग्दा पनि निःसन्तानको समस्या सिर्जना हुन सक्छ । यस्तो भएमा आकस्मिक बच्चाको सम्भावना पनि रहन्छ । यसरी एकअर्काको समस्या जुधेर निःसन्तान हुने समस्या भएमा कृत्रिम गर्भाधान सम्भव हुन सक्छ । तर, एकै पटकमा भने नहुन सक्छ ।
परिवार नियोजनका लागि अस्थायी साधनको प्रयोग पनि घातक बन्न सक्छ । लामो समय प्रयोग गरिने अस्थायी साधनका कारण निःसन्तानको समस्या हुन सक्छ । यस्तो समस्या महिलामा पनि हुन्छ । तर, कुनै–कुनै साधनले महिनावारी गडबड गराउँछ । महिलाले लामो समयका लागि प्रयोग गर्ने अस्थायी साधन उनीहरूका लागि घातक हुन्छ ।
-निःसन्तानको समस्या भएमा पहिला कारणको पहिचान गर्नु आवश्कय हुन्छ । कतिपय रोगको उपचार पनि गर्न सकिन्छ ।
-शुक्रकीटको कमी भएमा त्यसलाई बढाउनका लागि पनि चिकित्सकसँग सल्लाह लिन सकिन्छ ।
-यदि शुक्रकीटलाई बढाउन नसकेमा पुरुषको शुक्रकीट लिएर कृत्रिम गर्भाधानबारे पनि सोच्न सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा टेस्टट्युब बेबी पनि सम्भव हुन सक्छ।
-पुरुषमा डिम्ब नबन्ने समस्या भएको खण्डमा औषधि सेवन गर्न पनि सकिन्छ ।
-कतिपय अवस्थामा बढी तौलका कारण पनि निःसन्तानको समस्या हुन सक्छ । त्यसैले स्वास्थ्य जाँच गरी तौल घटाउनतिर लाग्न सकिन्छ ।
-इन्फेक्सनको उपचार गरेर पनि निःसन्तानको समस्याबाट मुक्त हुन सकिन्छ ।
-निःसन्तानको सम्भावित समस्याबाट बच्न विभिन्न अम्मलबाट पनि टाढा हुन आवश्यक छ ।
-जस्तै– चुरोट, लागुऔषधलगायतको लत छोड्नुपर्छ ।
-शुक्रकीट निर्माणका लागि अण्डकोशको तापक्रम ३२ देखि ३३ डिग्री सेन्टिग्रेटसम्म चाहिन्छ । लामो समय अत्यन्त गर्मी ठाउँमा काम गर्ने बाध्यता भएमा तापक्रम मेन्टेन गर्न आवश्यक हुन्छ ।
कब्जियत, ब्लड सुगर जस्ता समस्याका लागि अमृत समान केरा
ग्याष्ट्रिकको समस्या छ ? भुलेर पनि नखानुहोस् यी ४ खानेकुरा
चाउरीपना हटाउने बोटक्सबारे जान्नैपर्ने कुरा
शुक्रबारदेखि सक्रिय रहेको मनसुन आइतबारदेखि कमजोर बन्दै
बिहान खाली पेटमा नखानुहोस् यी खानेकुरा
मेवाको बिउ सेवन गर्दा पाइन्छ यी खतरनाक रोगबाट छुटकारा
छोराछोरीलाई खोप नलगाउने मातापितालाई ३ लाख जरिवाना !
म्युनिख। जर्मनीको सरकारले बालबालिकाको सुरक्षाको लागि नयाँ पहल थालेको छ ।...
‘सासुले मलाई छोरीको नजिक पर्न नदिएपछि मारेको हुँ’
बुटवल– ‘विवाह भएको केहि बर्षपछि सासुले आफ्नी छोरी अर्थात मेरी श्रीमतीलाई...
यी ६ अभिनेत्री, जसको बोल्ड सीन लिक भयो
मुम्बई। केही समय अगाडि अभिनेत्री राधिका आप्टेको नयाँ फिल्मको इन्टिमेट सीन...
ढुवानी व्यावसायीलाई आन्दोलित बनाउने भीसीटीएस के हो?
काठमाडौं। सरकारले बजेटमाफर्त ढुवानी तथा यातायात व्यवसायलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने...
बाजुरा। जिल्लाको जगन्नाथ गाउँपालिका–५ भुवाखोलामा आज बिहान जीप दुर्घटना हुँदा चालकसहित...
अष्ट्रेलियामा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ अनुष्ठान सम्पन्न
सिड्नी। इतिहासमा पहिलो पटक अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ...
बिहे गर्न लागेका सरकारी कर्मचारी बिहे छाडेर धर्नामा बसेपछि…
काठमाडौं। सामान्यतया बिहे जीवनमा एक पटक मात्र हुन्छ । बिहेको लागि...
काममा ढिलाइ गर्ने कर्मचारीलाई कारवाहीको व्यवस्था गर्न माग
काठमडाौं। प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले सेवाग्राहीको काममा ढिलाई गर्ने कर्मचारीलाई कडा कार्वाही गर्ने...
सियोल।दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोलस्थित जापानी राजदूतावास अघिल्तिर एक जना वृद्ध कोरियालीले...
नेकपा: ४३७ केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन हुँदै, संगठन विभाग प्रमुखमा वामदेव गौतम
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठक २०७६ साउन ५ गते...